Ihe omimi nke ikuku: gini bu ha na njirimara ha | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị maara na n'ahịrị niile nke ikuku enwere naanị ihe ngosi nke ikuku na troposphere. Na ihe omuma nke uwa ha na-ewere ọnọdụ n'akụkụ ụwa niile ma dabere na ọnụọgụ nke radieshon nke anyanwụ, ogo ebumnuche nke ụzarị anyanwụ, nrụgide nke ikuku, ọchịchị ikuku, ọnọdụ okpomọkụ na ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ isi ihe ikuku na-adị na ihe bụ njirimara ha.
1 Ihe ikuku
1.1 Oké ifufe, oké ifufe na ifufe
1.2 Akụkụ mmiri igwe na snow
2 Ihe ikuku di iche iche dika udi igwe oji
3 Ihe omuma ndi ozo
Oké ifufe, oké ifufe na ifufe
Ha bụ ọgba aghara ikuku siri ike, tinyere ifufe, egbe eluigwe na àmụmà na oke mmiri ozuzo. Ha na-emepụta igwe ojii mepụtara igwe ojii, a na-akpọ igwe ojii cumulonimbus. Ọ nwere ikuku dị ala nke ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ezuru oke ma ọ bụ ikuku dị elu dị elu (oge ụfọdụ).
Mmiri na-ezo mgbe igwe ojii gbakọtara na-emepụta mmiri buru ibu ma buru ibu karị, nke ikuku na-egbochi ikuku. Mgbe igwe ojii ndị a dị oke oke, mmiri ahụ na-ada n'ihi ike ndọda ma ga-ebute mmiri ozuzo, nke a kọwara dị ka nsị ma ọ bụ ọdịda mmiri ụmụ irighiri mmiri n'ihi mmachi nke alụlụ mmiri na ikuku.
Oke mmiri ozuzo kwekọrọ na obere ịda mba ma ọ bụ oké ifufe, ma nke siri ike, nke na - eweta eddy a na - ahụ anya nke a na - akpọ Chimney nke na - ada site na nne igwe ojii nke oke ifufe. Site na aha Cyclone, Hurricane ma ọ bụ ajọ ifufe, dabere na mpaghara ndị a, a na-akpọ ya etiti etiti nrụgide dị ala akpọrọ nke ukwuu, yana ifufe na mmiri ozuzo siri ike. Ọ na - adịkarị n'etiti 8º na 15º ohere ugwu na ndịda ma na - aga ọdịda anyanwụ.
Akara nke oke ifufe nwere ike ịdị iche site na mita ole na ole ma ọ bụ mita iri na narị ruo ọtụtụ narị mita. Ifufe a na-emepụta na oke ikuku nwere ike ịkpa ike. Nrụgide ahụ na-agbadata site na mpụga site na etiti oke ikuku ahụ, na-eme ka ikuku gburugburu vortex na-a suụ ya n'ime mpaghara ala mgbali dị n'ime, ebe mpaghara nrụgide dị ala na-agbasawanye ma na-ajụ oyi ngwa ngwa, ụdị mmiri ozuzo, na-eme ka ọfụma a na-ahụ anya. Mmetụta dị ala nke vortex ga-eburu irighiri ihe, dị ka ihe ndị na-adịghị ọcha ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, nke a ga-ebu ya ma fee n'okporo ụzọ ya, na-eme ka oke ikuku ahụ dị ka ọchịchịrị.
Akụkụ mmiri igwe na snow
Akụ mmiri igwe na-amalite site na ifufe siri ike yana ọnọdụ okpomọkụ pere mpe, ikuku siri ike na-adọkpụrụ nnukwu mmiri mmiri, mgbe ọ na-akpụkọta ya nwere ike iwepụta akụ mmiri igwe ma ọ bụ akụ mmiri igwe nke nwere ike iru ọtụtụ sentimita na dayameta. A kọwara ya dị ka mmiri ozuzo siri ike nke akpụrụ akpụ site na ntụ, conical ma ọ bụ biconvex ice n'okpuru oke nke ya.
Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru 0ºC, snowflakes na-amalite ịda. Flakes ndị a nwere obere kristal ice yana ọnụọgụ ọdịda ha dị obere.
Ihe ikuku di iche iche dika udi igwe oji
Ikuku na-ekpo ọkụ na-arịgo n'ọkwa kacha elu nke ikuku na-eji nwayọọ nwayọọ ajụ ka ọ na-arịgo, na-eme ka alụlụ mmiri wee ghọọ obere ụmụ irighiri mmiri, na-aghọ urukpuru.
Igwe ojii bụ otu n'ime ihe ndị kachasị emetụta ikuku na ọ na-abụkarị ihe a na-ahụ anya. Ọdịdị nke ihe a na-emetụta ọtụtụ ihe nke thermodynamic, bụ nke metụtara ihu igwe, nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ, mana nke a anaghị ewepụ eziokwu ahụ na mgbe ọ dị mkpa. Ihe omuma a nwere ihe omuma nke ihe omuma site na ihe okike na ihe omuma. Mgbe ịtọ ntọala maka ụdị igwe ojii dị iche iche na ọdịdị ha, ile ha anya site na ala ma ọ bụ site na satịlaịtị bụ isi ihe ikpe.
Enwere igwe ojii dị iche iche 3 dị ka ọdịdị na nsonazụ ha si dị:
Cirrus: Ha bu igwe-oji nke n’ile anya n’ebe di elu; ha dị gịrịgịrị, na-adị nro, na-enwekwa akụkụ ahụ́ dị n’ụrọ; mgbe feathery na-acha ọcha mgbe niile.
Igwe ojii: Ha bụ igwe ojii nke na-apụta mgbe niile dị ka igwe ojii ọ bụla, nwere ntọala dị larịị, ma na-etolitekarị n'ụdị domes vetikal, nke usoro ya yiri nke kọlịflawa, ha bụ igwe ojii oge gboo, na-acha ọcha na-acha ọcha na mpaghara ekpughere Sun na isi awọ ọchịchịrị na ndò ndị.
Strata: Ha bu igwe oji nke n’etu na nkpuchi oyibo, n’ile ekpuchi ihe nile, ma obu buru ibu. Stdị stratum n'ozuzu mejupụtara igwe ojii na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke nwere ike ibute ụfọdụ mgbawa, mana nke ọnụnọ nke igwe ojii n'otu n'otu enweghị ike iche, ya bụ, ha bụ otu ụlọ ojii nke igwe ojii na-eweta mmiri ozuzo na drizzle, gbasasịa ma nwee otu edo Ọdịdị. Nimbus: (obere igwe ojii, ọchịchịrị isi awọ mmiri ozuzo).
Ihe omuma ndi ozo
Ihe ndị dị na mbara igwe abụghị naanị mmiri ozuzo na ihe ndị metụtara igwe ojii. Ka anyi lee ihe ndi ozo di iche iche nke ikuku bu:
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ama na ịma mma nke na-eme na mbara igwe. Ha na-eme mgbe mmiri ozuzo na-ezo, mgbe mmiri ozuzo na-eme dị ka enyo, na-achụsasị ọkụ n'akụkụ niile, na-ere ma mekwa egwurugwu. Nke a na-etolite site aak kpụrụ anyanwụ ụzarị kụrụ na dobe mmiri na achụsasị na n'akuku nke ~ 138 degrees. Ìhè na-abanye na nkedo ahụ, wee weghachite, wee gaa na nsọtụ ọzọ nke dobe ahụ ma gosipụta ya n'ime elu ya, n'ikpeazụ, ọ na-abanye n'ime ọkụ rere ere ka ọ na-apụ. Egwurugwu na-ewekarị awa 3 ma na-ahụ ya mgbe niile n'akụkụ ọzọ site na anyanwụ.
Auroras bụ ihe ịtụnanya ndị na-eme na latitude ndị dịdebere mkpanaka ndọta ụwa n'ihi na ha sitere na mmekọrịta nke okporo igwe magnetik na akụkụ nke ifufe anyanwụ na-ebu. Mgbe ụmụ irighiri irighiri ahụ ruru ụwa, ha na ụmụ irighiri ihe na mbara igwe na-ejikọ, na-akpali ha (na-akpali ha), eziokwu nke na-emepụta aurora a maara nke ọma. Dabere na ebe ugwu ha nọ, a na-akpọ ha ugwu ma ọ bụ ebe ndịda auroras. Ọtụtụ mgbe, enwere ike ịhụ aurora na latitude n'elu 65º (eg Alaska, Canada), ma n'oge a na-arụ ọrụ nke anyanwụ (dịka oke ifufe nke anyanwụ), a ga-ahụ ya site na obere latitudes gburugburu 40º. Ihe omume ndị a nwere ike ịdị ihe dị ka otu elekere ma, ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ, ha nwere ike ịdịru abalị niile.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere isi ihe ndị dị na mbara igwe dị na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku